HEENSARAARKA DAMALADA (qaybtii 2aad) | Dhaymoole News
HEENSARAARKA DAMALADA (qaybtii 2aad)
2.Isku daawo muraayada adigoo hadlaya
hadaad doonayso inaad hore u mariso xirfadaada hadalka, waa in aad ka hor jeediso muraayada horteeda. Hadii aad sidaa samayso, waxa aad awood u yeelan doontaa inaad aragto muuqaalkaaga bandhigeed kolka aad la hadlayso koox dad ah iyo wax ka badan. Sidookale waxaad arki karaysaa in aad u baahantahay horumarinta dhaqdhaqaaqaaga wajiga iyo inkale, sida afka, idhaha iwm.
Ku celcelinta khudbadu waxay u socon kartaa si xidhiidh ah, sida marka aad dhegaystayaashaada u jeedinayso mawduuc wanaagsan ayna fadhiyaan hortaada iyagoo ku daawanaya kuna dhegaysanaya. Sikastaba-ha-ahaatee, codkaaga waad dhegaysankartaa. Hadalka oo marar badan aad ku celcelisaa waa mid ku caawin karta. Laakiin waxaa kasii fiican marka aad codkaaga duubto islamarkaana dhegeysato, maxaa yeelay waxaad dhab ahaan sii qiimaynkaraysaa sida dhegeystayaashaadu u arki doonaan sawdka khudbada aad jeedin doonto.
4.Joogtee xirfadaada weelaynta
Maskaxdaada oo aad soofeysaa waxay kaa caawin kartaa khudbad jeedinta. Maxaa yeelay xaalad kasta, oo aad rabto in aad khudbad ka horjeediso fagaare loo dhanyahay, wixii aad odhan lahayd waa inuu kuu diyaarsanyahay. Horumarinta xirfadaada weelayntu waxay ku imankartaa kaliya akhrinta buugaagta adigoo isku diyaarinaya weelaynta dhawr tuduc oo kamida buuga.
waligaa maanka ku hay marka aad fagaare ka hadlayso, in dadka aad la hadlayso dhaayahoodu dhankaaga soo jiraan. Inkastoo dadka badidoodu aanay aad u tixgalin huga aad xidhantahay, ama habka aad u soo labisatay kolka aad ka hor khudbadaynayso, hadana waxa wanaagsan in aanad ka badbadin ee labiskaagu noqdo mid dhexdhexaad ah. Aadna soo xidhato shay aad ogtahay in aanu kalsoonidaada waxba u dhimayn, kaas oo naftaada siin kara bar bilaw fiican oo aad ka hadasho.
Aad wax uga baro fagaare ka hadalka
Sahaminta habab kala duwan ama tabbo fagaare ka hadal ku saabsani waxay kaa caawin kartaa horumarinta xirfadaada hadalka. Sahamintaada waxaad u samayn kartaa qaab ah adigoo akhriya buugaag iyo magaasaano farabadan oo ku saabsan fagaare ka hadalka, jeedinta khudbadaha ama jeedinta damalada. Marka laga yimaado booqashada kaydadka aqooneed ee khudbad jeedinta, waxa kale oo aad hubin kartaa website-yada, laga heli karo buugaagta elektarooniga ah ee ku saabsan jeedinta khudbadaha.
Raadso cid ku barta jeedinta khudbadaha
raadinta cid kaa caawisa barashada fagaare ka hadalku waxay sidoo kale noqon kartaa talaabo horleh oo ku gayaysiin karta in aad ka lib gaadho barashada fagaare ka hadalka. Si kastaba ha-ahaatee, marka ay timaado waxaad u baahantahay inaad iska hubiso in cida aad soo kiraysatay ay dhab’ahaantii khibrad fiican u leedahay fagaare ka hadalka. Marka taa laga yimaado, waxa wanaagsan in macalinkaasi aanu noqon mid qoyskaaga iyo asxaabtaadu aanay kugu khasbin inuu macalin kuu noqdo.